Global Voices teny Malagasy » Afaka mianatra anaty sekoly an-tsambo ireo vondrom-piarahamonina dibo-drano any Bangladesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2020 14:28 GMT 1	 · Mpanoratra Samaya Anjum Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara, Voina
Fandaharan'asa vaovao nataon'ny FTMF (ONG) BRAC ny Shikkha Tori , adika ara-bakiteny hoe ‘sambo fampianarana’ ary ahafahan'ny ankizy monina any amin'ny faritra sasany tratran'ny tondra-drano betsaka indrindra sy ny faritra iva any Bangladesh  hanatrika lakilasy anaty sekoly an-tsambo .
Iray metatra monja no elanelan'ny haavon'ny ranomasina amin'ny iray ampahatelon'ny faritra ao Bangladesh, indrindra ny faritra any avaratra-atsinanana. Lasa rano be midadasika mandritra ny vanim-potoanan'ny orana sy ny rivotra ireo faritra mando ireo izay antsoina hoe haor any an-toerana  ary mijanona ho tondradrano mandritra ny 7 ka hatramin'ny 8 volana isan-taona. Mandritra io vanim-potoana io, difotra ny lalana ka tsy ahafahan'ireo mpianatra avy amin'ny fianakaviana mahantra manatrika ny sekoly mahazatra.
Na izany aza, nanomboka nampiditra ny sekoly an-tsambo ho fomba iray hitondrana an-dakilasy ireo ankizy ny fikambanana tsy mitady tombontsoa toa ny Shidhulai Swanirvar Sangstha , ary taty aoriana, ny BRAC . Natao ho mpitatitra rano ihany koa ireo sambo ireo izay maka ireo mpianatra  mivantana avy any an-tranony.
I Mohammed Rezwan, mpanorina sady tale mpanatanteraka ao amin'ny Shidhulai Swanirvar Sangstha no nahita ny hevitra tamin'ity sambo fampianarana ity  noho ny fahatsiarovany ny fahazazany. Nihalehibe tao amin'ny faritra iray tratran'ny tondra-drano matetika izy ary tamin'ny alàlan'ny sambo fampianarana izay an'ny fianakaviany no hany mba nahafahany nianatra nandritra ny vanim-potoanan'ny orana sy ny rivotra. Na izany aza, maro tamin'ny namany tamin'ny fahazazany no tsy afaka nisitraka izany.
Tamin'ny taona 2002 no nandray fivoy  ny sekoly an-tsambo voalohany niaraka tamin'ny fanampiana avy amin'ny fikambanana toy ny Orina Mpanasoa Global Fund for Children sy ny Orina Mpanasoa Bill sy Melinda Gates.
Maherin'ny 9 tapitrisa ny isan'ny mpianatra mandeha amin'ny sekoly fanabeazana fototra  ao amin'ny firenena, raha manodidina ny 110.000 kosa ny isan'ny sekoly fanabeazana fototra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Manodidina ny 20 tapitrisa ireo mponina monina amin'ny faritra mando ao amin'ny firenena ary latsaky ny 1% -n'ny mponina monja ao amin'ny faritra no mahavita ny fampianarana ambaratonga faharoa.
Nanomboka ny sekoly an-tsambo  voalohanyihany koa ny BRAC, FTMF=ONG lehibe indrindra any Bangladesh, tamin'ny taona 2012 ho ampahany amin'ny tetikasan'izy ireo ho an'ny fanabeazana .
Nahatratra 80.000 mahery ireo mpianatry ny sekoly an-tsambon'ny Shidhulai Swanirvar Sangstha hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa, ary nahatratra 14.000 mahery  ny sambon'ny BRAC. Samy nampiakatra ny tahan'ny fidirana an-tsekoly ireo hetsika roa ireo.
Na dia tsy ao anaty rindrina efatra toy ny ny efitrano fampianarana mahazatra aza no hanaovana ny fampianarana dia voaporofo fa tsy mena-mitaha amin'ny mpianatra hafa  ao amin'ny firenena ireo mpianatra avy amin'ireo tetikasa ireo.
Ahitana trano famakiam-boky kely, zoro-trano hianarana momba ny siansa ary solosaina enti-tànana misy aterineto ny sambo Shidhulai Swanirvar Sangstha sasany raha manana takela-masoandro izay mamatsy herinaratra ny sambo amin'ny alina mba ahafahan'ny  mpianatra miasa amin'ny atoandro manatrika ny fampianarana  kosa ny sambo hafa sasany .
Nisy ny mpanao asa soa tao an-toerana nanapa-kevitra ny hitondra an-dakilasy ireo mpianatra amin'ny endrika sekoly an-tsambo. Ity sambon'ny Shidhulai Swanirvar Sangstha ity, vondrona tsy mitady tombontsoa ao an-toerana dia iray amin'ireo sekoly miisa 23 mavitrika mandritra ny taona any amin'iny faritr'i Bangladesh  iny.
Nalain'ny firenena an-dalam-pandrosoana hafa tahaka toa an'i Filipina , Kambodza , Nizeria , Vietnam  ary Zambia  ny foto-kevitry ny sekoly an-tsambo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/26/146944/
 tratran'ny tondra-drano betsaka indrindra sy ny faritra iva any Bangladesh: http://www.brac.net/program/floating-schools-for-climate-change/
 faritra mando ireo izay antsoina hoe haor any an-toerana: https://en.wikipedia.org/wiki/Haor
 maka ireo mpianatra: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/09/12/646378073/floating-schools-make-sure-kids-get-to-class-when-the-water-rises
 hevitra tamin'ity sambo fampianarana ity: https://www.shidhulai.org/about-us.html
 nandray fivoy: https://www.youtube.com/watch?v=8YgV9AM2jco
 isan'ny mpianatra mandeha amin'ny sekoly fanabeazana fototra: http://data.banbeis.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:table-21-number-of-primary-education-institution-teacher-and-student-2014&catid=182:primary-education-2014&Itemid=247
 sekoly an-tsambo: https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-017-0077-z
 tetikasan'izy ireo ho an'ny fanabeazana: http://www.brac.net/program/wp-content/uploads/2019/12/Factsheet-BRAC-Education-Programme-June-2019.pdf
 nahatratra 14.000 mahery: https://educateachild.org/sites/default/files/docs/2020//Boat%20School_final.pdf
 hafa sasany: https://www.facebook.com/drzeeshan.alam/posts/1121796071209595